ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ဓာတုဗေဒဌာနနှင့် စိမ်းလန်း အမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းတို့ ဦးဆောင်၍ ဆရာ/ ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများအား
Lead Accessor နှင့်ပတ်သက်၍ ဌာနတွင်းဆွေးနွေးခြင်း ( ၁၆-၉-၂၀၁၆)
ဓာတ်ခွဲခန်းရှိခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများဖြင့် ပညာရေး နှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုပေးနိုင်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရန်ကုန် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်တွင် ဆွေးနွေးခြင်း ( ၁၄-၉-၂၀၁၆ )
(ခ) ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာနိင်ငံရှိ ဓာတ်ခွဲခန်းကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များ ဓာတ်ခွဲ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
UNIDO နှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းကိစ္စရပ်များ ဆွေးနွေးခြင်း
PTB ( Germany ) နှင့် Lab network အတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းကိစ္စရပ်များကို ဓာတ်ခွဲခန်း (၁၇) ခုမှ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်း (၁ – ၉ -၂၀၁၆)
PTB ( Germany ) မှကြီးမှူး၍ အစားအသောက်များထဲမှ အဆိပ်အတောက် ဒြပ်စင်များဖြစ်သော အာဆင်းနစ်၊ မာကျူရီ ပါဝင်မှု တိုင်းတာခြင်း သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ခြင်း (၃၀ -၁ -၂၀၁၇) မှ (၇ – ၂ – ၂၀၁၇ )ထိ
(ဃ) ဓာတ်ခွဲခန်းအဆင့်မြင့်စက်များ တိုင်းတာမှုသင်တန်းပို့ချခြင်း
FEI Co.Ltd. မှ Transmittion Electron Microscopy; TEM စက်အတွက် application training အား Yuanqiang Bai. မှ crystal , particles အား တိုင်းတာမှုသင်ကြားပေးခြင်း
Visual Inspection နည်းစဉ်အတွက် အသုံးပြုသော IRis စက်ဖြင့် application training အား လက်တွေ့တိုင်းတာမှုသင်ကြားပေးခြင်း
(င) ပြည်ပတက္ကသိုလ်/အဖွဲ့အစည်းများမှပညာရှင်များအမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းရှိခေတ်မီစက် ပစ္စည်းများဖြင့် တိုင်းတာဆောင်ရွက်နေမှုများကို လာရောက်လေ့လာခြင်း
University of Wisconsin နှင့် Duke University ( Environmental Engineering ) USA မှ ပညာရှင်များလာရောက်လေ့လာခြင်း
Korea Institute of Material Science မှ ပညာရှင်များလာရောက်လေ့လာခြင်း
JICA Program, Tokyo University မှ Professor, Dr. Kobayashi